Amaokwu Baịbụl dị n’isiokwu a: Nsọpụrụ -> Ezigbo agwa
Ezigbo agwa: [Nsọpụrụ]
1 PITA 2:17
Sọpụrụnụ mmadụ nile. Na-ahụkwanụ ndị nile kwere ekwe nꞌanya. Na-atụnụ egwu Chineke Nna, na-asọpụrụnụ ndị na-achị achị.
Hụrịtanụ onwe unu nꞌanya dị ka ụmụ nke otu nna. Ka ihe ibe unu na-eme na-atọ unu ụtọ. Na-asọpụrụkwanụ ibe unu.
Ka mmadụ nile nye Ọkpara Nna nsọpụrụ dị ka ha si enye Nna. Onye ọ bụla na-adịghị asọpụrụ Ọkpara adịghị asọpụrụ Nna. Nꞌihi na ọ bụ Nna zitere ya.
Dị ka Jisọs si ekwu, “Onye amụma adịghị enwe ugwu nꞌala a mụrụ ya.”
1 TIMỌTI 1:17
Ka otuto na nsọpụrụ dịrị Chineke ruo mgbe nile ebighị ebi. Onye bụ eze nꞌọgbọ nile, onye a na-apụghị ịhụ anya. Chineke na-adịghị anwụ anwụ, Onye nanị ya bụ Chineke. Ka otuto na nsọpụrụ dịrị ya ruo mgbe nile ebighị ebi. Amin.
 Ruberenụ ndị na-achị achị isi nꞌihi na ọ bụ Chineke tọrọ ntọ ala ọchịchị nile dị nꞌụwa taa. Ọ dịghị ọchịchị gọọmentị dị, ma ọ bụghị nke Chineke tọrọ ntọ ala ya. Ya mere ndị ọ bụla na-eguzo imegide ọchịchị ọ bụla, na-emegide Chineke. Ọ na-ewetakwara ha ikpe ọmụma. Ndị na-achị achị anaghị esogbu ndị na-emeghị ihe ọjọọ. Kama ọ bụ ndị mehiere iwu ka ha na-ahụ. Nꞌihi na onye na-emeghị ihe, ihe anaghị eme ya. Ọ bụrụ na ị chọghị ka e sogbuo gị, mee ihe iwu chọrọ. Onye nọ nꞌọchịchị bụ onyeozi Chineke. Ọ na-arụ ọrụ ya ịhụ maka ọdịmma gị. Ọ bụrụ na i mee ihe ọjọọ, o kwesịrị ka ụjọ ju gị obi na ọ ga-ata gị ahụhụ. Nꞌihi na Chineke ziri ya ka ọ taa ndị na-eme ihe ọjọọ ahụhụ. Nꞌihi nke a, rube isi nꞌiwu gọọmentị nile, na iwu ndị na-achị achị nyere. Ọ bụghị nanị nꞌihi na Chineke ga-esite nꞌaka ha taa onye na-erubeghị isi ahụhụ, kama ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ka anyị mee. Ọ bụkwa nꞌihi nke a ka unu ga-eji tụọ ụtụ taksi unu nꞌoge, ka ndị ọrụ gọọmentị nwee ike nọgide na-arụ ọrụ ahụ Chineke nyere ha ịrụ. Kwụọnụ ụgwọ ọ bụla unu ji, ọ bụrụ na ị tụbeghị ụtụ taksi gị, gaa tụọ ya. Ruberenụ ndị isi unu isi. Sọpụrụnụ ndị nsọpụrụ ruru, ma na-akwanyerenụ ndị nkwanye ugwu ruru.
“Ọ bụrụ na onye ọ bụla achọọ ijere m ozi, ya so m. Ndị ozi m ga-anọkwa nꞌebe mụ onwe m nọ. Ọ bụrụ na mmadụ ọ bụla abụrụ onyeozi m, Nna m ga-asọpụrụ ya.
 Ụmụ, ruberenụ ndị mụrụ unu isi nꞌihi na nke a bụ ọrụ unu dị ka ndị nke Kraịst. Ọ bụkwa ihe ziri ezi ka unu mee. “Sọpụrụ nna gị na nne gị,” bụ iwu mbụ dị mkpa nke nwekwara ụgwọ ọrụ nye ndị ọ bụla debere ya. Ụgwọ ọrụ ahụ bụ, “Ka ihe nile gaara unu nke ọma, ka unu biekwa ogologo ndụ.”
“Sọpụrụ nna gị na nne gị,” bụ iwu mbụ dị mkpa nke nwekwara ụgwọ ọrụ nye ndị ọ bụla debere ya.
 Nna adịghị ekpe mmadụ ọ bụla ikpe. Ọ hapụụrụ Ọkpara Nna ikpe ikpe nile. Ka mmadụ nile nye Ọkpara Nna nsọpụrụ dị ka ha si enye Nna. Onye ọ bụla na-adịghị asọpụrụ Ọkpara adịghị asọpụrụ Nna. Nꞌihi na ọ bụ Nna zitere ya.
Nꞌihi na Chineke nyere unu iwu sị, ‘Sọpụrụnụ nne na nna unu, onye ọ bụla kwujọrọ ndị mụrụ ya ka a ga-egbu.’
1 TESALỌNAIKA 4:4
2 PITA 1:17
Eso m nọdụ nꞌelu ugwu ahụ dị nsọ mgbe Chineke mere ka otuto ya na nsọpụrụ ya pụta ìhè. Eji m ntị m nụrụ mgbe olu ahụ dị ebube si nꞌeluigwe kwuo okwu sị, “Onye a bụ Ọkpara m m hụrụ nꞌanya nke ukwuu, onye ihe ya dịkwa m ezi mma.”
 “Nwa atụrụ ahụ e gburu kwesịrị ịnara ike nile, na akụ nile, na amamihe, na ume, na nsọpụrụ nile, na otuto nile na ngọzi nile!” Mgbe ahụ anụrụ m ka ndị nile nọ nꞌeluigwe na ndị nọ nꞌụwa na ndị nọ nꞌokpuru ụwa, na ndị nọ nꞌokpuru oke osimiri na-eti mkpu na-asị, “Ka ngọzi nile, na nsọpụrụ nile, na otuto nile, na ike nile dịrị Onye ahụ na-anọkwasị nꞌocheeze ahụ, ha dịkwara Nwa atụrụ ahụ ruo mgbe ebighị ebi!”
“Amin! Ngọzi na amamihe nile na ekele nile na nkwanye ugwu nile, na ike nile, na ebube nile dịrị Chineke anyị ruo mgbe nile ebighị ebi. Amin.”
1 KỌRINT ६:२०
Chineke jikwa ihe dị oke ọnụ ahịa zụpụta unu. Ya mere jirinụ anụ ahụ unu nye Chineke otuto.
 “Sọpụrụ nna gị na nne gị,” bụ iwu mbụ dị mkpa nke nwekwara ụgwọ ọrụ nye ndị ọ bụla debere ya. Ụgwọ ọrụ ahụ bụ, “Ka ihe nile gaara unu nke ọma, ka unu biekwa ogologo ndụ.”
 Mgbe ihe e kere eke anọ ndị ahụ malitere inye onye ahụ na-anọkwasị nꞌelu ocheeze ahụ na-adị ndụ ruo mgbe nile ebighị ebi otuto nile, na nsọpụrụ nile, na ekele nile, iri ndị okenye abụọ na anọ ahụ na-adakwa nꞌala nꞌihu ya na-efe ya ofufe, bụ onye ahụ na-adịgide ruo mgbe nile ebighị ebi. Ha nile nꞌotu nꞌotu na-atụda okpu eze ha nꞌihu ya na-abụ abụ na-asị, “Ọ bụ nanị gị Onyenwe anyị na Chineke anyị kwesịrị ịnara otuto, na nsọpụrụ, na ike. Nꞌihi na ọ bụ gị kere ihe nile, ọ bụkwa site nꞌọchịchọ gị ka e ji kee ha, ma meekwa ka ha dịrị ndụ.”
 Otu ụbọchị, ndị Farisii na ụfọdụ ndị ozizi iwu sitere Jerusalem bịa ịhụ Jisọs. Mgbe ha gbara ya gburugburu, ha hụrụ ụfọdụ nꞌime ndị na-eso ụzọ Jisọs ka ha ji aka na-adịghị ọcha na-eri nri. Ha akwọghị aka tupuu ha erie ihe, dị ka omenala ndị Juu sịrị dị. Ọ bụ omenala ndị Juu, nke ka nke ndị Farisii, na tupuu mmadụ erie ihe, ọ ga-ebu ụzọ kwọọ aka ya. Omenala a bidororị nꞌoge dị anya. Ọ bụrụ na ndị Juu esite nꞌahịa lọta, ha agaghị eri ihe ọ bụla tutuu ha akwọọ aka ha. Ọ dịkwa omenala ọzọ dị iche iche ha nwere dị ka omenala ịsacha iko, ma ọ bụ ịsacha ite na efere. Nꞌihi na ndị na-eso ụzọ Jisọs edebeghị omenala ndị Juu a, ndị Farisii jụrụ Jisọs ajụjụ sị, “Gịnị mere ndị na-eso ụzọ gị adịghị edebe omenala ndị okenye anyị? Gịnị mere ha jiri were aka rụrụ arụ na-eri nri?” Jisọs zara sị ha, “Okwu ahụ Aịzaya kwuru banyere unu ndị ihu abụọ bụ eziokwu. Nꞌihi na Aịzaya buru amụma sị, ‘Ndị a ji ire dị ụtọ na-ekwu okwu banyere m, ma nꞌime obi ha, ha ahụghị m nꞌanya. Ofufe ha na-efe m esiteghị nꞌobi ha pụta. Ihe ha na-ezikwa ndị mmadụ abụghị iwu m, kama ọ bụ iwu nke aka ha, nke ha chepụtara nꞌụche ha.’ Unu atụfuola iwu Chineke ma jidesiekwa omenala unu ike.” Mgbe ahụ Jisọs gwakwara ha okwu sị, “Ihe unu na-eme bụ iwezụga iwu Chineke ka unu were omenala unu dochie nꞌọnọdụ ya. Dị ka ịma atụ, Mosisi nyere unu iwu sị, ‘Sọpụrụnụ nne na nna unu, onye ọ bụla kwujọrọ nne ya na nna ya ga-anwụ.’ Ma unu na-ewezụga iwu Chineke a mgbe unu na-ezi ndị mmadụ sị, Ọ̀ bụ ihe ziri ezi ka mmadụ ọ bụla gwa nne ya na nna ya mkpa na-akpa sị, ‘Lee, ego nile m nwere ugbu a bụ nke Chineke. Enweghị m ihe ọ bụla m ga-enye unu.’ Nꞌụzọ dị otu a unu na-akwagide ndị mmadụ ka ha hapụ inyere nne na nna ha aka nꞌọnọdụ mkpa ha. Nꞌụzọ dị otu a kwa, unu na-ewezụga iwu Chineke were omenala unu dochie nꞌọnọdụ ya. Ọ dịkwa ọtụtụ ụzọ ọzọ unu si ewezụga iwu Chineke ma na-ewerekwa omenala unu dochie nꞌọnọdụ ya.”
 Mgbe ahụ, ụfọdụ ndị Farisii na ndị Juu si Jerusalem bịara ịjụ Jisọs ajụjụ. Ha jụrụ ya sị, “Gịnị mere ndị na-eso ụzọ gị adịghị erube isi nꞌomenala ndị okenye anyị? Tupuu mmadụ erie nri, ọ bụ omenala anyị na onye ahụ ga-ebu ụzọ kwọọ aka. Ma ndị na-eso ụzọ gị adịghị eme nke a.” Jisọs zara ha sị, “Gịnị mekwaranụ unu ji na-emebi iwu Chineke nꞌihi omenala unu? Nꞌihi na Chineke nyere unu iwu sị, ‘Sọpụrụnụ nne na nna unu, onye ọ bụla kwujọrọ ndị mụrụ ya ka a ga-egbu.’ Ma nꞌọnọdụ iwu a, unu na-ezi ndị mmadụ sị, ‘Ọ bụrụ na onye ọ bụla enwee ihe ọ ga-eji nyere ndị mụrụ ya aka, onye ahụ nwere ike ịjụ inyere ha aka ma ọ bụrụ na o kwuo na ihe ọ bụla o nwere bụ nke Chineke.’ Nꞌọmenala unu onye mere ihe dị otu a mere ihe ziri ezi, mgbe ọ jụrụ iji ihe o nwere sọpụrụ ndị mụrụ ya. Gịnị ka nke a na-egosi? Ọ̀ bụghị na unu emeela ka iwu Chineke bụrụ ihe dị ala karịa omenala unu? “Ndị ihu abụọ! Amụma ahụ Aịzaya buru banyere unu bụ eziokwu. Nꞌihi na Chineke sitere nꞌọnụ ya kwuo sị, ‘Ndị a ji egbugbere ọnụ ha na-asọpụrụ m, ma obi ha dị anya site nꞌebe m nọ. Ịkpọ isi ala ha bụ ihe efu, nꞌihi na ọ bụ ozizi mmadụ ka ha na-ezi nꞌọnọdụ iwu Chineke.’ ”
 Mgbe Jisọs hụrụ otu ndị a kpọrọ oriri ahụ si họrọ nanị oche dị mkpa, oche dị mkpa, ọ gwara ha okwu a nꞌilu sị. “Ọ bụrụ na onye ọ bụla akpọọ gị oriri ọlụlụ nwụnye, abatala nọdụ nꞌoche dị mkpa, nꞌihi na ma eleghị anya, onye kpọrọ gị oriri kpọkwara ndị ọzọ dị mkpa karịa gị.
2 KỌRINT 6:8
Ụfọdụ mmadụ na-asọpụrụ anyị ma ndị ọzọ na-eme anyị ihe ihere. Ụfọdụ na-ata anyị ụta, ma ụfọdụ na-eto anyị. Ụfọdụ mmadụ na-agụ anyị dị ka ndị ụgha, ma anyị nọgidesịrị ike na-ekwu eziokwu.
Mgbe ahụ anụrụ m ka ndị nile nọ nꞌeluigwe na ndị nọ nꞌụwa na ndị nọ nꞌokpuru ụwa, na ndị nọ nꞌokpuru oke osimiri na-eti mkpu na-asị, “Ka ngọzi nile, na nsọpụrụ nile, na otuto nile, na ike nile dịrị Onye ahụ na-anọkwasị nꞌocheeze ahụ, ha dịkwara Nwa atụrụ ahụ ruo mgbe ebighị ebi!”
“Ọ bụ nanị gị Onyenwe anyị na Chineke anyị kwesịrị ịnara otuto, na nsọpụrụ, na ike. Nꞌihi na ọ bụ gị kere ihe nile, ọ bụkwa site nꞌọchịchọ gị ka e ji kee ha, ma meekwa ka ha dịrị ndụ.”
1 TIMỌTI 6:16
Chineke bụ onye nanị ya na-adịghị anwụ anwụ. Onye na-ebi nꞌime ìhè, nke mmadụ ọ bụla na-apụghị ịbịaru nso. Onye mmadụ ọ bụla na-ahụbeghị anya mgbe ọ bụla, onye a na-apụkwaghị ịhụ anya. Ọ bụ ya ka nsọpụrụ na ike dịrị ruo mgbe ebighị ebi. Amin.
Mmadụ ọ bụla apụghị ime onwe ya onye nchụaja. Ọ bụ nanị Chineke pụrụ ime mmadụ ka ọ bụrụ onye nchụaja. Cheta na ọ bụ Chineke mere Erọọn ka ọ bụrụ onye nchụaja.
Ma otu ọ dị banyere ajụjụ ị jụrụ m, ị maara ihe iwu na-ekwu. Ọ sị, ‘Akwala iko, egbula mmadụ, ezula ohi, agbala ama ụgha, sọpụrụ nne na nna gị.’ ”
Iwe were ha nꞌebe ọ nọ. Ma Jisọs gwara ha okwu sị ha, “A na-asọpụrụ onye amụma nꞌebe nile, ma a dịghị asọpụrụ ya nꞌala a mụrụ ya, na nꞌetiti ndị ikwu ya.”
Ma Jisọs zara ha sị, “A na-asọpụrụ onye amụma nꞌebe nile, ma onye amụma adịghị enwe nsọpụrụ ọ bụla nꞌala a mụrụ ya, na nꞌetiti ndị ikwu ya na nꞌezinụlọ o siri pụta.”
 Mgbe ahụ Jisọs gwara ha sị, “Oge ahụ abịala mgbe a ga-ebuli Nwa nke mmadụ elu. Eziokwu ka m na-agwa unu. Mkpụrụ ọka apụghị ịmị mkpụrụ karịakwa ma ọ dabara nꞌala nwụọ. Ma o meghị otu a ọ pụghị ịmị mkpụrụ. Kama ọ bụrụ na ọ nwụọ, ọ ga-amị mkpụrụ hie nne. Onye ọ bụla hụrụ ndụ ya nꞌanya ga-etufu ya. Onye ọ bụla kpọrọ ndụ ya asị nꞌụwa a, gaedebe ya ruo ebighị ebi. “Ọ bụrụ na onye ọ bụla achọọ ijere m ozi, ya so m. Ndị ozi m ga-anọkwa nꞌebe mụ onwe m nọ. Ọ bụrụ na mmadụ ọ bụla abụrụ onyeozi m, Nna m ga-asọpụrụ ya.
Ma anyị na-ahụ Jisọs, onye e mere ka ọ dị ala nanị otu mgbe. Onye e mere ka ndị mmụọ ozi dị elu karịa ya, ka ọ hụọ ahụhụ nwụọkwa nꞌihi mmadụ nile. Nꞌihi ọnwụ ọ nwụrụ, Chineke ewerela nsọpụrụ kpube ya nꞌisi dị ka okpueze.
1 TIMỌTI 5:3
O kwesịrị ka chọọchị na-enyere ụmụ nwanyị di ha nwụrụ aka, ma ọ bụrụ na ha enweghị onye ọ bụla gaelekọta ha anya.
1 TIMỌTI 6:1
O kwesịrị ka ndị Kraịst bụ ohu naarụsiri ndị nwe ha ọrụ ike, ma naenyekwa ha nsọpụrụ kwesịrị ha. Ha emekwala ihe ọ bụla ga-eme ka ndị mmadụ sị na ụmụ Chineke bụ ndị na-adịghị arụsị ọrụ ike. Ekwekwala ka a chịa aha Chineke ọchị, ma ọ bụ ka a chịa ihe a na-ezi banyere ya ọchị nꞌihi nke a.